ICCA: any amin'ny firenena 30 voalohany i Kolombia amin'ny fivoriana fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » ICCA: any amin'ny firenena 30 voalohany i Kolombia amin'ny fivoriana fizahan-tany
Ny laharana fanao isan-taona nataon'ny International Congress and Convention Association (ICCA) dia nanambara fa tafiditra ao anatin'ny firenena 30 ambony mampiantrano kongresy iraisam-pirenena i Kolombia. Tamin'ny taon-dasa, nampiantrano hetsika 147 i Colombia, laharana faha-29, ambonin'i Russia, New Zealand, Chile, and South Africa, sns.
Ilay lisitra, antsoina hoe ICCA Statistics Statistics Country & City Rankings, dia ahitana firenena 165, mampiseho ny fahaizan'i Kolombia sy ny tombony azo amin'ny fifaninanana amin'ny fivoriana fizahan-tany. Ohatra, i Colombia dia nijanona fahatelo tany Amerika atsimo — ambonin'i Brezila sy Arzantina — tamin'ny ankamaroan'ny hetsika sokajy ICCA notontosaina.
“Ny valin'ity lisitra ity dia miresaka betsaka momba ny mety ho fizahan-tany any Kolombia. Mazava fa tianay ny hahatonga ny fizahantany ho loharanom-baovao amin'ny fampiroboroboana ara-toekarena vaovao sy fidiram-bola vahiny, ho fomba iray hampitomboana ny fananana ara-bola sy ny fandraharahana any amin'ny faritr'i Kolombia, ”hoy i José Manuel Restrepo Abondano, minisitry ny varotra, indostria ary fizahan-tany.
Etsy ankilany, Flavia Santoro, filohan'ny ProColombia, dia nilaza hoe: "Vaovao vaovao ity, manamafy fa i Kolombia dia toerana mahaliana sy mpifaninana amin'ny fandraisana hetsika iraisam-pirenena avo lenta. Fantatray ny maha-zava-dehibe ny fizahantany fizahan-tany. Noho izany, ao ProColombia, izahay dia miara-miasa amin'ireo manampahefana isam-paritra, biraon'ny birao ary efi-trano fandraharahana hanohy hisarika hetsika izay hisy fiantraikany tsara amin'i Kolombia ary hampitombo ny isan'ny mpitsidika vahiny amin'ity sehatra ity. ”
Ity antontan-taratasy ity dia misy koa ny tatitra amin'ny antsipiriany momba ny fiantraikan'ny fisehoan-javatra nahasarika an'i Kolombia. Ohatra, nanambara fa olona 50,313 no nanatrika ireo kongresy sokajy 147 ICCA natao tany Kolombia tamin'ny taona 2018, ka nahazoany vola mitentina 84 tapitrisa dolara amerikana. Ny mpitsidika tsirairay dia nandany eo ho eo $ 465.60, ary ny halavan'ny hetsika dia 3.6 andro.
Ankoatr'izay, Bogotá dia nampiantrano hetsika 46 tamin'ny taona 2018 — betsaka noho ny tanàna Kolombiana hafa rehetra — laharana faha-enina ao Amerika Latina ho an'ny ankamaroan'ny kongresy natao, ao aorinan'i Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile, ary ny tanànan'ny Panama. Bogotá dia arahin'i Cartagena, miaraka amina hetsika 35, ary Medellín, miaraka amin'ny 25.
Ahitana hetsika natao tany amin'ny tanàna hafa toa an'i Cali, Barranquilla, ary Santa Marta ihany koa ny lisitra. Santa Marta no nampiseho ny fitomboana betsaka indrindra, satria tsy nampiantrano kongresy ny tanàna tamin'ny taona 2017, avy eo nampiantrano 5 tamin'ny taona 2018. Miavaka ihany koa i Barranquilla, tamin'ny fampiantranoana hetsika 3 tamin'ny 2017 ka hatramin'ny 6 ny taona manaraka.
Tamin'ny volana novambra lasa teo, nanambara ny ICCA fa voafidy hampiantrano ny kongresy eran-tany 2021 i Cartagena, voafidy amin'ireo tanàna mifaninana toa an'i Rotterdam sy Athens.
Ity hetsika ity dia manatevin-daharana hetsika malaza malaza iraisam-pirenena narovan'ny Kolombia, toy ny World Tech Organization an'ny fizahan-tany fizahantany, nokarakaraina tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity; ny Kaongresy manerantany momba ny famatsiana fanafody (2019); ny Vovonana an-dranomasina eran-tany (2019); ny World Independent Advertising Awards (2019); ny Antenimieram-pirenena IDB (2020); ary Fiexpo Latam ho an'ny taona 2020, 2021, ary 2022, tany Cartagena, Medellín, ary Bogotá.
Ho an'ny governemantan'i Kolombia, ny fampiroboroboana ny firenena ho toy ny toeram-pizahan-tany fizahan-tany dia manampy amin'ny famoronana asa mivantana sy ankolaka amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary koa ny fampiasana tsara indrindra ny foiben-toeran'ny fivoriambe, ny toerana fandraisam-bahiny, ary ny toerana tsy nentim-paharazana manerana an'i Kolombia.
Vao tsy ela akory izay, ny minisiteran'ny Varotra, ny indostria ary ny fizahan-tany dia nanolotra ny drafitra stratejika hanatsarana ny fizahan-tany MICE (Fivoriana, Insentif, Fifanarahana ary fampirantiana). Ny tanjon'ity drafitra ity dia ny hitarihan'i Kolombia an'i Amerika Latina amin'ny fivorian'ny fizahan-tany amin'ny taona 2027. Ity tetik'asa ity dia hanolotra fepetra hampiroboroboana ny fihaonambe sy ny hetsika any Kolombia.
San Francisco Marriott Marquis 'Drew Tenerio dia mahazo ny mari-pankasitrahana “mari-boninahitra tsara indrindra” an'ny Marriott International
RIU Hotels & Resorts dia manokatra hotely vaovao roa ao Maldives